Shirkad sameysa Filimada “Sex ah” Oo Dacweynaysa Amir Sacuudiyan ah#Warkii hore war soo dhaaf | Xaqiiqonews
Shirkad sameysa Filimada “Sex ah” Oo Dacweynaysa Amir Sacuudiyan ah#Warkii hore war soo dhaaf
Waraaqaha maxkamada waxay muujinayaan in shirkaddu ay rabto lacag u dhiganta £ 78,000 oo ah ‘qaansheegad aan lacag la bixin’ ah oo ku saabsan filim Sex ah oo loo sameeyey si shakhsi ahaaneed amiirkii geeriyooday ee sacuudiga amiir Saud-sida uu qoray Wargeyska Daily Mail.
Inkastoo Lacgatnti ay tahay Mid aad u yar marka loo fiiryo Qoyska Boqortooyada (Royal Family), hase ahaate tani waxa ay muujineysaa in Paris ay aheyd goob saldhig ah Oo lagu sameeynayey filimo Dhaqan Xun.
Sida Xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay Dailymail, Caruurta Uu dhalay Amir Saud ayaa Ika diiday eedeyntan, waxeyna sheegeen in aabahood uusan lug ku laheyn arimahan iyagoo iska diiday in ay bixiyaan deynta.
Sida laga soo xigtay caddaynta maxkamada, gabar Moroccan ee aan la aqoonsan ayaa waxaa la sheegay in ay ka tagtay Paris iyadoo sitay lacag, waxayna ku baxday amarka amiir Saud.
Walaalkiis Amir Mohammed Bin Salman, ayaa haatan booqasho saddex maalmood ah ku tagaya Faransiiska, halkaas oo uu martigelinayo madaxweyne Emmanuel Macron.
Sacud Al-Faisal, ayaa ka qalin jebiyey Jaamacadda Princeton wuxuuna ku hadlaa todobo luuqadood, wuxuuna ahaa wasiirkii arrimaha dibedda ee Sacuudi Carabiya laga soo bilaabo 1975 ilaa 2015 – waa rikoor caalami ah.
Wuxuu guursaday ina adeertiis Jawhara bint Abdullah bin Abdul-Rahman wuxuuna lahaa saddex wiil iyo saddex gabdhood.
Safaaradda Sacuudi Carabiya ee Paris ayaa diiday in ay faallo ka bixiso kiiskan socoda.